Galaxy S4 Video Converter: Sidee inay gool u sarifaan Video Si Galaxy S4
> Resource > Samsung > Sidee inay gool u sarifaan Video inay Galaxy S4 ee Tayada Sare
Samsung Galaxy S4 ayaa noqday iyo aad u badan oo caan ah adduunka oo dhan. Its screen ballaaran oo sarajooggeeduna-qeexidda qalabka ka badan taleefanka mobile smart ka dhigaa. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa ciyaaryahan ahaan warbaahinta la qaadan karo u ciyaaro aad jeceshahay heeso iyo filimaan ku saabsan go ka. Nasiib darro, qalabka taageertaa qaabab multimedia aad u yar oo keliya natively. Waxaa loola jeedaa si toos ah ma waxaad ka ciyaari kartaa filimada ama videos ugu on Galaxy S4. Maqaalkani waxa uu ku tusayaa sida aad si loogu badalo videos in Galaxy S4 effortlessly, si aad ku raaxaysan kartaa wixii video si xor ah ku qalab aad.
Xoog badan ayaa wax sahlan in la isticmaalo Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) badalo karaa qaab maqal iyo muuqaal kasta oo ay u Samsung Galaxy S4 qaab socon in tayo sare leh. Markaas, aad awoodo inuu ciyaaro, kuwaas oo files multimedia qalabka si habsami leh oo ku dhawaad ​​ah video tayada asalka ah. Iyada oo taageero u ah, waxaad si buuxda u raaxaysan karaan nolosha digital in Galaxy S4 kuu keenaa. Hadda, kaliya raacaan tutorial hoose si aad u ciyaaro kasta video on Galaxy S4 si xor ah.
1 videos Add to video Samsung Galaxy S4 ay Converter
Hit ah button ku bar weyn ee menu. Markaas, daaqad arbushin doonaa, waxaad keentay in la helo kuwaas videos aad rabto in aad si loogu badalo. Next, kaliya iyaga-double guji si ay dajiyaan in ay leeg- tahay tan app ee. Isla markiiba, aad arki doonaa iyaga tusay sida thumbnail ah. Ogsoonow in app this taageertaa howlgal jiitaa-n-dhibic iyo diinta Dufcaddii.
2 Dooro Samsung Galaxy S4 sida qaab wax soo saarka
App Tani si gaar ah loogu qaab wax soo saarka ah ee Samsung Galaxy S4 ah. Qaab wax soo saarka waxa uu ka dhigayaa video ah la gediyay gudbiyo 100% la jaan qaada qalabka.
Mouse jiirka guddi Qaabka Output dhinaca midig ee suuqa oo guji image qaab halkaas. Markaas, dooro "Device" category, oo waxay helaan "Samsung"-category sub adigoo riixaya badhanka arrow hoos. Hadda, aad halkan ka arki kartaa dhammaan qalabka Samsung oo caan ah, oo ay ku jiraan Samsung Galaxy S IV. Just u doortaan sida qaab wax soo saarka.
3 Beddelaan videos in Samsung Galaxy S4
Ka dib marka aad soo dhoofsadaan dhan ah videos aad doonayay oo dooran qaab wax soo saarka ah ee Galaxy S4, waxaad xaq ah "Beddelaan" button rukun-xaq u hooseysa oo ka mid ah app this 's interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan diinta video. Next, app this ka dhigi doonaa files kuwaas oo ku haboon qalab aad ku daqiiqo.
Ka dib markii diinta, riix "Open Folder" butten in ay helaan gediyay video files, oo markaas iyaga wareejiyo qalab aad via cable. Waxaad ka heli doontaa videos, kuwaas oo lagu ciyaari karo Galaxy S4 iyadoo wax dhibaato ah.